Kooxda Futzalka SCE 3 ayaa guuldaro kula kowsatey horyaalka Futzalka 3e klasse B Zaal Voetbal dalka Holand.
Magaalada Nijmegen dalka Holand ayaa waxaa ka dhisan koox dheesha Futzalka isla markaana ay ka mid yihiin dhalinyaro Soomaaliyeed oo dagan magaalada Nijmegen xaafada Dukenburg, kuwaas oo wax ka barta jaamacadaha ku yaal dalka Holand.
Kooxda Futzalka SCE3 ayaa la aasaasay sanadkii hore 2007/2008 isla markaana ay horyaalka ka galeen kaalinta 3aad.
Horyaalka sanadkaan 2008/2009 ayaa ka qayb qaadanaya 9 naadi isla markaana isku wada arki doono min labo goor ayaa si rasmi asbuuci dhawaa uga biloowday bariga dalka Holand.
Kooxda SCE 3 ayaa waxay ciyaar kula yeelatey Eendracht '30 1 garoonka Jan Mazinhal oo ku yaal duleedka magaalada Nijmegen, ciyaartaas oo ahayd mid aad u xiisa badan ayna ka soo qayb galeen dadwayne kala tageersanaa labada kooxood ayaa ku dhamaatey in kooxda SCE 3 looga adkaado xaafadooda 4 goal iyo 5 gaol halka guusha ay ku raacday kooxda Eendracht '301.
Mar aan la xiriirey ciyaaryahan ka mid ah kooxda SCE3 magaciisana la yiraahdo Guled Mohamed Abdi si aan u su’aalo guuldarada la soo gudboonaatey kooxda ciyaartii ugu horeysay horyaalka sanadkaan, madaama sanadkii hore aan laga badanin ilaa la gaaro biloowgii ciyaaraha is aragyada dambe ayaa ii sheegay inay aad u daaleen isla markaana ay soonaayeen sidaa daraadeedna looga badiyay hasayeeshee ay dadaali doonaa ciyaaraha soo socda.
Kooxda SCE3 ayaa ka qayb qaadanaysa horyaal si rasmi ah uga diiwan gashan xiriirka Futzalka dalka Holand, ka qayb galida tartamadaan oo kale ayaa waxay faaido badan u leeyihiin dhalinyarada Soomaaliyeed eek u nool qurbaha madaama tartamadaan ay yihiin kuwa ay kaga faaidaysan karaan inay mustaqbalkooda ciyaaryahanimo.
Ciyaarta Futzalka ayaa ah ciyaar ku dhisan xeelad iyo farsamooyin gaar ah taas oo wax badan ka duwan tan kubadda cagta oo u baahan xoog iyo awood marka laga soo tago farsamada, hadii jaaliyada Soomaaliyeed ay xooga saarana waxaa mustaqbalka laga yabaa inay garoomada caalamka lagu arki doono kooxo Soomaaliyeed iyo amaba dhalinyaro Soomaaliyeed oo ka soo muuqan doono.
Kooxda SCE3 waxay tusaale fiican oo lagu daydo u tahay dhalinyarada Soomaaliyeed iyo kooxaha Soomaaliyeed ee ka dhisan dalalka Galbeedka Yurub iyo North Amerika, kuwaas aan ogayn inay ka qayb gali karaan horyaalada ka socda magaalooyinka ay joogaan.